Ny fanadinoana ny induction sy ny fanentanana mafana dia dingana vita amin'ny varahina, vy vy
Fanadinoana sy fananganana endrika induction manondro ny fampiasana milina fanamafisam-peo fampidirana amin'ny metaly alohan'ny hafanana alohan'ny fiovana amin'ny alàlan'ny fametahana na hammer. Matetika ny metaly dia hafanaina eo anelanelan'ny 1,100 sy 1,200 ° C (2,010 sy 2,190 ° F) mba hampitombo ny tsy fahaizan'izy ireo sy ny fikorianan'ny fanampiana amin'ny forging die.
Metal fanadinoana fanosotra sy famoronana mafana dia fampidinana famatsian-drano tsara indrindra. Ny dingana fanadinana indostrialy sy ny famolavolana mahamay dia misy ny miondrika na mamorona bileta vita amin'ny vy na mamony rehefa avy mamaivay amin'ny hafanana izay malemy ny fanoherana ny fanovana. Ny sakana amin'ny fitaovana tsy ferrous dia azo ampiasaina koa.
Fangatahana fametrahana feno
Raha ampitahaina amin'ny lafaoro mahazatra, ny milina fanamafisana induction amin'ny fametahana dia manome tombony lehibe sy kalitao lehibe:
Ny milina fampandroana arofototra automated dia mila laboratoara kely indrindra
Sokajy Technologies Tags fanadinadinana, mamorona mafana, induction forging, fanorana mony, induction hot forming furnace Post Fikarohana
Ahoana ny famolavolana coil fanorana induction
Drafitra fanatanjahantena ho an'ny fanatanjahana